Wasiirka ganacsiga Soomaaliya oo booqday warshadaha ugu waaweyn dalka Cummaan, Sawirro – Hornafrik Media Network
Wasiirka ganacsiga Soomaaliya oo booqday warshadaha ugu waaweyn dalka Cummaan, Sawirro
By Liibaan Nuur	 On Feb 22, 2020
Wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda Soomaaliya Eng. Cabdullaahi Cali Xasan iyo wefdi uu hoggaaminayey ayaa socdaal shaqo ku jooga dalka Cummaan, waxayna shirar gaar-gaar ah iyo booqashooyin ku saabsan iskaashi ganacsi oo dhex-mara labada dal ka sameyeen Saldanada Cummaan.
Wasiirka ayaa waftigiisa waxaa ku wehliyey danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Cummaan Cabdiweli Cali Axmed Jaylaani, waxa ay booqasho ku tageen warshadda soo-saarta Saliidda iyo warshadda farsamaysa fiilooyinka xambaara Internet-ka xawaraaraha sare leh ee dalkaas.
Wasiir Cabfullaahi ayaa madaxda warshadahan kala hadlay siddii ay u maal-gashan lahaayeen Soomaaliya, waxaana uu ku dhiiri-geliyey inay faracyo kale oo warshadahan ah ay ka furtaan gudaha Soomaaliya.
Dhanka kale, wasiir Cabdullaahi Cali Xasan ayaa la kulmay wasiirka gaadiidka ee Saldanada Cummaan Axmed Bin Maxamed Al-Futaisi ahna guddoomiyaha shirkadda ASYAD oo ah shirkad maamusha dekadaha iyo goobaha ganacsiga xorta ah ee dalkaas.
Labada Wasiir, ayaa ka wadlay sidii ay iskaga kaashan lahaayeen ganacsiga gaadiidka, isla markaana loo heli lahaa duulimaad toos ah oo Cummaan iyo Soomaaliya iskaga kala goosha.
Mas’uuliyiintan ayaa sidoo kale isla soo hadal-qaaday sidii labada dal ay uga wada faa’ideysan lahaayeen marin biyoodka isku xira badweynta Hindiya iyo Badda-Cas oo uu maro ganacsiga ugu badan ee iskaga goosha qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub.
Wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya Inj. Cabdullaahi Cali Xasan, waxa kale oo uu la kulmay wakiilka Beeraha iyo Kalluumaysiga ee dalka Cummaan Dr. Sucuud Bin Xamuud, waxayna ka wada-hadleen siddii dalaga beeraha iyo kalluunka Soomaaliya loogu iib-geyn lahaa dalka Cummaan iyo inay iska kaashadaan sare u qaadidda tayada kalluunka iyo dalaga beeraha Soomaaliya.
Ugu dambeyntii, ujeedada safarka wasiirka gansiga Soomaaliya Eng. Cabdullahi Cali Xasan ee dalka Cummaan, ayaa ahayd sidii loo ballaarin lahaa suuqyada loo iib-geyn karo badeecadaha Soomaaliya loona heli lahaa suuqyo cusub oo Soomaaliya ay badeecadeheeda u dhoofiso.
Is-bedello weyn oo lagu sameeyey talisyada booliska ee deeganada Galmudug
Xisbiyada mucaaradka ah ee Somaliland oo dalbaday doorasho degdeg ah